Podcast 2x13 an'ny Actualidad iPad: iPhone 7 ary zoma mainty tsy manjombona | Vaovao IPhone
Mitohy ny tsaho momba ny manaraka iPhone 7: mpampifandray USB, tsy misy jack headphone, efijery OLED, fakan-tsary roa ... Ho tonga hatraiza isika? Izahay koa mamakafaka ny Zoma Mainty voalohany tao anatin'ny taona maro nefa tsy nanolotra ny Apple. Ireo sy ireo vaovao hafa ao amin'ny podcast isan-kerinandro an'ny Actualidad iPad. Halahelo azy ve ianao?
Henoy ny »2 × 13: iPhone 7 ary zoma mainty manjombona» ao amin'ny Spreaker.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Vaovao IPhone » Podcast » Podcast 2 × 13 an'ny Actualidad iPad: iPhone 7 ary zoma Mainty tsy misy fotony
Ho tonga amin'ny fitaovana Sonos i Apple Music amin'ity volana ity